Vanotengesera Mumigwagwa Vochemachema Nekushaya kweKutengesera
Gumiguru 26, 2018
Mapurisa ekanzuru yeHarare achisunga vanotengesera mumigwagwa.
Mukuru wesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu, reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, VaSamuel Wadzayi, vanoti nhengo dzavo dziri kushushikana kwazvo nekushaya kwekutengesera sezov vakawanda vavo vasati vawana kwekutengesera mushure mekubviswa mukati meguta.
VaWadzayi vanoti vamwe vavo vakanga vaenda paCobacabana asi zvakazoitika svondo rapera zvekuparadzwa kwemisika yavo zvakasiya nhengo dzavo dzisisina kwekuenda, kunyange hazvo dzakanga dzabviswa mukati meguta dzichinzi dzitengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru.
Vanoti semaziviro avo, Copacabana ndeimwe yenzvimbo dzacho dzakatarwa kunzi dzitengeserwe, asi vakazoshamisika voparadzirwa midziyo. Vanoti kusvika pari nhasi vanhu ivavo havasati vapiwa kumwe kwekuenda, izvo zviri kuita kuti mhuri dzavo dzitambure.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeHarare VaMichael Chideme kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi as vachitaura pane imwe nyaya ne Studio 7 vanoti vese varikuisa zvivakwa munzvimbo dzisingabvumirwi vari kupedza nguva nekutambisa mari yavo nekuti zvicharamba zvichipunzwa kusanganisira vemisika.
Hurukuro na VaSam Wadzayi
Zimbabwe Inoti Yakagadzirira Kutaurirana neEthiopia paNyaya Yekudzoserwa kwaMengistu Akatongerwa Rufu neHumhondi
Zvinhu Zvotonyanya Kudhura Kunyangwe VaMnangagwa Vakavimbisa Kudzikamisa Hupfumi neMitemo Mitsva
Vanhu Vanomwe Vofa Mushure Mekudonhera muMugoghi kuGwanda